Sonam Kapoor, Asin, Katrina Kaif, Ayesha Takia Iyo Atiriishooyinka Salman Khan Da’ahaan Dhali Karo Haddana Jaceyl Shaashada Kula Wadaagay (+Sawiro) – Filimside.net
Sonam Kapoor, Asin, Katrina Kaif, Ayesha Takia Iyo Atiriishooyinka Salman Khan Da’ahaan Dhali Karo Haddana Jaceyl Shaashada Kula Wadaagay (+Sawiro)
Salman Khan waa mid kamid ah atoorayaasha India ugu caansan iyo mid kamid ah kuwa awooda fanka la wareegen xiliyo kala duwan xidigaan ayaa maanta shaaca looga qaaday inuu sameeyn doono film magac ahaan loo bixiyay Inshallah oo Alia Bhatt la jileyso.
Balse xidigaan da’ahaan atiriishadan wuu ka weyn yahay oo farqi 27 sano ayaa labadooda u dhaxeysa oo wuuba dhali karaa saas eetahay Bhansali ayaa laga rabaa shaashada inuu Salman kaga dhigo wiil dhalinyaro ah oo daawadayaashaba shaki galo.
Hadaba akhriste Alia Bhatt ma ahan atiriishadii ugu horeysay ee Salman Khan shaashada la wadaago da’ ahaana in badan ka weynaado ee waxaa jiraan atiriishooyin badan oo uu horey sidaan oo kale ula soo shaqeyay isagoo dhali karo fadlan hoos kaga bogo…
Sneha Ullal: waa 31 jir waxuuna Salman ka weyn yahay da’ahaan 22 sano hadana saas eetahay waxay wada sameyeen filmka jaceylka ah ee Lucky-No Time For Love.
Sonam Kapoor: waa 33 jir waxuuna Salman ka weyn yahay da’ahaan 20 sano hadana saas eetahay waxay wada sameyeen filmkii jaceylka ahaa ee Prem Rathan Dhan Payo.
Ayesha Takia: waa 32 jir waxuuna Salman ka weyn yahay da’ahaan 21 sano hadana saas eetahay waxay wada sameyeen filmkii Wanted.
Asin: waa 33 jir waxuuna Salman ka weyn yahay da’ahaan 20 sano hadana saas eetahay waxay wada sameyeen filmada Ready, London Dreams iyo kuwa kale.
Jacqueline FernandeZ: waa 33 jir waxuuna Salman ka weyn yahay da’ahaan 20 sano hadana saas eetahay waxay wada sameyeen filmkii Kick iyo Race 3.
Zarine Khan: waa 31 jir waxuuna Salman ka weyn yahay da’ahaan 22 sano hadana saas eetahay waxay wada sameyeen filmka Veer.
Anushka Sharma: waa 30 jir waxuuna Salman ka weyn yahay da’ahaan 23 sano hadana saas eetahay waxay wada sameyeen filmka Sultan.
Katrina Kaif: waa 35 jir waxuuna Salman ka weyn yahay da’ahaan 18 sano hadana saas eetahay waxay wada sameyeen filmo dhowr ah sida taxanaha Tiger.
Priyanka Chopra: waa 36 jir waxuuna Salman ka weyn yahay da’ahaan 17 sano hadana saas eetahay waxay wada sameyeen filmo dhowr ah sida Mujhse Shaadi Karoge, Salaam-E-Ishq iyo kuwa kale.
Akhriste dhamaan atiriishoyiinka sarre kuxusan ee uu Salman lasoo shaqeyay da’ahaan wuu dhali karaa hadana lama dareemin markii uu shaashada la wadaagayey sidaa si lamid ah Alia Bhatt-na lama dareemi doono oo Salman isagaaba ah hader qof muuqaalkiisa shaashada ku dadaaalo siduu isku yareen lahaa.